Dabley Al-Shabaab ah oo Boosaaso ku dhaawacday taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDabley Al-Shabaab ah oo Boosaaso ku dhaawacday taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland
December 15, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taliye ku xigeenka ciidamada booliiska Puntland, Jaamac saxardiid. [Xuquuqda Sawirka: Maxamed Xirsi Jabra/wariye katirsan TV-ka dowladda Puntland]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dablay hubaysan oo Al-Shabaab katirsan ayaa magaalada Boosaaso ku dhaawacday taliye ku-xigeenka booliiska Puntland Jaamac Saxardiid.
Taliyaha ayaa loola cararay isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso halkaas oo lagu dabiibayo, sida ay ilo-wareedyo caafimaad sheegeen.
Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay ku sheegeen idaacada afkooda ku hadasha ee Al-Andalus.
Al-Shabab gunmen wound Puntland’s deputy police officer in Bosaso port town
Bosaso-(Puntland Mirror) Al-Shabab gunmen have wounded Puntland’s deputy police officer Jama Sahardid in Bosaso port town of Bari region, sources said. The officer was rushed to the Bosaso public hospital in the town where he [...]
headline Related PostsMay 10, 2017 Turkish Prime Minister invited to London Somalia ConferenceMarch 24, 2017 Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak oo lix sanno kadib helay xoriyadiisaMarch 22, 2018 Biyo yaraanta iyo raadadka [...]